Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay cadaadis kala kulantay IGAD - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay cadaadis kala kulantay IGAD
Wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa sheegay in markii ay tageen dalka Jabuuti ay u diyaar garoobeen in ay soo bandhigaan xaqiiqda edeymaha ay u jeediyeen dowladda Kenya.
Waxaa uu sheegay wasiirka in Madaxda IGAD ay caddaadis ku saareen in arintaasi si hoose loo xaliyo laguna xaliyo qaab wadahadal ah oo aan imaan shirka IGAD, sidoo kalena guddi gaar ah loo saaro.
Wasiirka waxaa uu sidoo kale rajo wanaagsan uu ka muujiyay in dib loo soo celiyo xiriirkii kala dhaxeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya dalka.
“Dad badan waxaa laga yaabaa inay ka walwalsan yihiin Soomaaliya iyo Kenya in xiriirkooda xumaaday laakiin waxaa ogaataan Kenya iyo Soomaaliya waa labo dal oo deris ah inay yihiin, xiriir aad u dheer I uu ka dhaxeeyo, dad badan Soomaali iyo Kenyan ah ay faa’ido u leedahay xiriirka oo wanaagsanaada, Kenya iyo Soomaaliya ay ku qasban yihiin inay soo ceshadaan xiriirkooda, waqtiga ay munaasabka tahay sida ugu munaasibsan oo uu ku doo noqonaayo xiriirkaas” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya.
Madaxda Urur Goboleedka IGAD ayaa waxa ay soo saareen war mutiyeed ay ku soo koobeen waxyaabihii ay kaga hadleen shirkii ay shalay ku yeesheen magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti.
Shirka oo ahaa mid aan caadi ahayn ayaa waxyaabihii loogaga hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha dalalka ururkaas xubnaha ka ah sida Suudaan, South Sudan, Itoobiya, Soomaaliya iyo cudurka safmarka ah ee dunida halakeeyay.
Hasayeeshee war murtiyeedka meelna loogama sheegin waxa ay madaxda iska tiri khilaafka diblumaasiyadeed ee soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Kenya.
Previous articleIGAD oo baaq ka soo saaray khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya
Next articleSaraakiil Gadoodsan oo maleeshiyaad ku aruursanaya Muqdisho